Raysulwasaare C/weli oo booqday dhaawacyadii Buulobarde, una ambabaxay Switzerland – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
19th March 2014 A warsame Af Soomaali 0
Muqdisho – Mareeg.com: Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta booqday dadkii ku soo dhaawacmay qaraxii dhawaan ka dhacay degmadda Buula-Barde ee Gobolka Hiiraan, isagoo dhinaca kale u ambabaxay magaalada Geneva ee xarunta dalka Switzerland oo uu uga qeyb galayo shir gaar ah oo looga hadlayo arimaha Soomaaliya.
Booqashada Ra’iisul wasaaraha uu ugu tagay Cisbitaalka Xalane waxaa ku wehliyey Ra’iisul wasaare ku-xiggeen ahna Wasiirka Diinta iyo Awqaafta Soomaaliya, Mudane Ridwaan Xirsi Maxamed iyo xubno kale oo aad u fara badan.
Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed oo mid mid u booqday qeybaha ay ku jiraan dhaawacyada ayaa ka xog wareystay xaaladda ay ku sugan yihiin, waxaana inta badan ay yihiin kuwa ay ka soo reeneyso dhaawacyadii ka soo gaaray ciidamada weerarkii naftii halignimada ahaa ee ka dhacay Degmada Buulo-Barde ee gobolka Hiiraan.
Ra’iisul wasaaraha ayaa Warbaahinta u sheegay in booqashadiisu ay aheyd in uu la socdo xaaladda ay ku sugan yihiin ciidamada, waxaana uu Alle uga baryey in uu caafmaad siiyo, isagoo intaa raaciyey in aysan marnaba joogsan doonin dagaallada nabad diidka looga adkaaday ee weli socda.
“Waxaan soo booqanay ciidamadii sida geesinimada ah ka hortagay weerarkii argagixiso ee ka dhacay Buulo-Barde, Caafimaad ayaan Alle uga baryayaa, waxaana leeyahay sii wada dagaalka lagula jiro kooxaha nabad-diidka ah” ayuu yiri Ra’iisul wasaaraha.
Dhinaca kale Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya, Cabdiweli Sheekh Axmed, ayaa ka war-bixiyey Safar shaqo uu ugu ambabaxay magaalada Geneva ee dalka Switzerland, halkaas oo uu u tegayo arrimo la xiriirra sidii Soomaaliya looga gacan siin lahaa caawimadda dadka Soomaaliyeed ee deegaannadooda laga saaray Al-Shabaab.